Tarsan ayaa si kulul u weeraray Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya. – STAR FM SOMALIA
Tarsan ayaa si kulul u weeraray Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, La taliyaha dhinaca siyaasadda ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa si kulul u weeraray Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya.
La taliyaha, ayaa Khamiistii sheegay Xildhibaanada Baarlamaanka in ay ku jiraan waxa ugu yeeray ganacsi siyaasadeed, ka dib markii sida uu sheegay ay ka taggeen hawlihii shaqo ee loo igmaday.
“Baarlamaankaynii shaqadii loo doortay ma hayaan, wuxuu ahaa sharci dejiye. Sharci dejiye ma yahay Baarlamaankaynii? Baarlamaankaynii shaqadii loo doortay ma hayo. Baarlamaankaynii wuxuu ku jiraa ganacsi siyaasadeed.” Ayuu yiri La taliyaha dhinaca siyaasadda ee Madaxweynaha.
“Boqolkiiba sagaashan (90%) Madaxweynaha waqtigiisa waxaa qaatay Baarlamaanka. Boqolkiiba sagaashan (90%) waqtiga Ra’iisal Wasaaraha waxaa qaatay Baarlamaanka. Ma waxaa loo doortay Madaxweynaha in uu Baarlamaanka u shaqeeyo mise waxaa loo doortay shacabka Somaliyeed gees ka gees inuu u shaqeeyo? Ra’iisal Wasaarihii Xukuumadda ma waxaa loo magacaabay in uu Baarlamaanka u shaqeeyo mise waxaa loo magacaabay inuu umadda Somaliyeed uu u qorsheeyo adeeggii ay bulshadan u baahnayd?” Ayuu yiri Tarsan.
Tarsan, ayaa ku celiyay in Xildhibaanada Baarlamaanka ay hareer marayn wixii loo doortay, taasi bedelkeedana ay wax argagax geliya ku noqdeen Madaxdii Qaranka, sida uu yiri.
Shir looga Hadlaayo Hormarinta Garoomada Dalka oo Ka Dhacay Magalaada Muqdisho.